Ciise ayaa ku soo laabtay in 1 iyo 2 Tesaloniika | Apg29
Horeba cutubkii ugu horeeyay halka ay Paul sheegaye waxbarista asaasiga ah ee Ruuxa Quduuska ah ama toobad Assembly, sida uu sheegaye waqti isku mid ah waxa ay noqon doontaa rajada shirka iyo filasho, kuwaas oo ku soo laabtay Ciise.
First, rayrayn ee waxbarashada muhiim ah waa in ay qayb muhiim ah oo aasaas Golaha iyo wacdiga. Sidoo kale waa dhacdo waa in gaar ah oo kala duwan ee la xiriirta Ciise arki u imanayaa inuu dhulka, iyo halkii ay sharaxaad ka mid ah Rabbiga ah ka soodagi samada ka soo ceshano oo dhifasho uu shirka naftiisa si. Kor waxa kale oo uu kulan ka mid ah kuwa jecel yahay, kuwaas oo isku mar la rayrayn dhintay ka soo sara.
Wada jir ah ula 1 Corinthians 15, sidii waa Bawlos warqad si kaniisadda Tesaloniika, qaar ka mid ah warqaddii ay ugu fiican u tilmaamaya soo laabashada Ciise. Waraaqaha jawaabaha ka mid ah arrimaha waxa rayrayn ay tahay, iyo marka ay dhacdo.
Tani waa dib u eegidda laba warqadaha Bawlos in ay na siiyaan fahamka jeer dhamaadka, iyo xiriirka ka dhexeeya maalinta Ciise Masiix ay tahay oo sidoo kale maalin uppryckelsens, iyo maalin Rabbigu waa Ciise xukunna geli dunida this. The warqado noo dhiiri waqti isku mid ah in ay ku noolaadaan filanayeen oo joogta ah soo laabashada Ciise, oo na siiyo ballamo adag oo cad in la sii wado cadhada Ilaah.
Paul waraaqahaas qoray waqti aad u gaaban ka dib markii uu aasaasay kaniisadda Tesaloniika joogay. On uu safarka labaad, Paul in magaalada, halkaas oo kaniisad la aasaasay yimid (Falimaha Rasuullada 17: 1).
Sababtoo ah ee iska caabin in injiilka noqonayaa Paul ayaa u qaxay, oo uu qoray warqado u dhiiri shirka joogin markii uu isagu kaga Timothy uu maqlay oo ku saabsan dulqaadashada, rumaysadka iyo jacaylka.
Kor - caqiido muhiim ah
Dad badan ayaa ka qaadista rayrayn sida caqiido muhiim ah ama wax baraya. Masiixiyiinta qaar ayaa waxa ay diidi fudud, ama ka dhigan tahay in ay tahay oo kaliya in ay calaamad ama tusaale ahaan la fahamsan yahay. Qaar kale waxay aaminsan yihiin in rayrayn ay tahay oo keliya xaq, laakiin in ay qasmeen Caqiidooyin ka muhiimsan sida Trinity ama baabtiiska.
warqado waa dhiirigelin ah in kaniisaddu in ay sii wadaan in ay ku socdaan rumaysad iyo in ay adkaysasho oo xagga Rabbiga. Inta lagu jiro cadaadis weyn oo qaba ay heleen injiilka, oo uu ka noqday sanamyadiisii. Hadda waxay wareejiyay Rabbiga oo wuxuu u adeegay hal iyo Ilaaha runta ah oo keliya.
Waa maxay rayrayn?
Haddii aynu nahay si ay u sharxaan oo sharaxaya waxa ku rayrayn yahay, waxaa jira dhinac iyo weji ka mid ah sheegi karo badan:
Ma jiro ballan qaadyada pre-gaarey saabsan rayrayn kaniisadda in ay ka dhigan tahay "dhow" ama la xiriira. Taas macnaheedu waa in kaniisadda waa nool yihiin filasho joogta ah soo laabashada Rabbiga, iyo in Ciise wuxuu ku saabsan yahay in guriga ha noo saareen. Inkasta oo waxaa la tilmaamay sida kor iyo in neefta la mid ah sida dhibaatadii weynayd, taas oo macnaheedu yahay qayb ka mid ah geeddi-socodka in ay bilowdo iyo maalinta Rabbigu ama dhib bilaabo waa. Hal mar Rabbiga siinayaa rahaamad shirka si aan qayb ka mid ah uu noqdo.
Kor - HARPAZO
1 Tesaloniika 4: 16-17 - Waayo, markii taliska weyn, oo cod weyn ee Mikaa'iil iyo buunka Ilaah, Rabbiga qudhiisu samaduu kala soo degi doonaa. Markaasaa kaliya Masiixa rumaysnaa oo dhintay sara kici doonaa. Haddaba, waxaan taas oo kuweenna nool oo hadha waa la qaban doona ilaa (harpazo) oo daruuraha wada iyaga oo leh Rabbiga u hawada kula kulanno. Oo sidaas daraaddeed waxaan jiri doonto weligeed Rabbiga la tahay.
Ereyga "rayrayn" ka timaadaa this aayadda Bible loo tarjumay ka erayga Giriigga ah "harpazo" in "la qabtay." Tani erayga "harpazo" waxaa ku xusan oo kaliya 13 jeer Axdiga Cusub, oo waxaa loo isticmaali doonaa kaliya in 1 Tesaloniika 4 oo xidhiidh la leh rayrayn shirka.
"HARPAZO" (leeyihiin-qoyaan-zoe) dhigan yahay xagga Giriigga "qatimay" qaataan ama garanaa si lama filaan ah. Harpazo noqday eray laatiin ah "raptus," taas oo iyana noqday ereyga Ingiriisida ah ee "rayrayn." In Sweden aannu turjumay fikradda ah "qaadida The" la rayrayn.
Waxa xiiso leh in la arko sida erayga loo isticmaalo, waxaana la tilmaamay in Axdiga Cusub maxaa yeelay waxa ay ina siinaysaa fahanka galay macnaha erayga, iyo fahamka la joogo Golaha noqotaa mid kor loogu qaaday xagga Rabbiga si uu ula kulmo meel. Waxaan la kulmi erayga harpazo labadaba xidhiidh la leh Ciise, Paul, Philip, Yooxanaa Baabtiisaha iyo Ciise ballan qaaday in carruurtiisa.
2 Korintos 12: 2 - Waxaan garanayaa nin Masiix ku jira oo afar iyo toban sannadood ka hor kor loo qaaday (HARPAZO) ilaa samada saddexaad - in ee jirka ku jira ama ka baxsan jidhka ee anigu garan maayo.
Bawlos waxaa kor loogu qaaday samada halkaas oo uu noqday mid ku lug qarsoon ee Ilaah. hadalkii oo kale ku HARPAZO sidoo kale loo isticmaalaa Ciise Muujintii in lagu qeexo loosoo, Sarakicidda kuwii dhintay ka dib markii
Muujintii 12: 5 - Oo iyana waxay dhashay cunug, wiil, kuwaas oo ahaa inuu u taliyo quruumaha oo dhan ul bir ah, oo ilmaheediina waxaa kor loogu qaaday (HARPAZO) in Ilaah iyo carshigiisa.
Mat 11:12 - Tan iyo wakhtigii Yooxanaa Baabtiisaha ilaa hadda boqortooyada jannada ah in dagaal, iyo raggii reer dulmin rabshadaha (HARPAZO) waxaa.
In la xidhiidha John adeegga Baabtiisaha waxa uu noqonayaa erayga HARPAZO sidoo kale loo isticmaalaa. Markii Ciise xabsiga ku jiray, ayuu masaal ku hadlaa ku saabsan John in la xidhiidha (fiican) rabshadaha iyo tuugo dulmiya oo cirka jooga. (Qaado by Translation xoog eng.) Si ay u hirgeliyaan wax xoog / awood waa macnaha ah ee erayga HARPAZO.
Rabbigu goortuu yimaado si ay dadkiisa u soo ururiyo, ayuu dhufsan doono Golaha xoog.
Philip wax wacdiyi jiray
Falimaha Rasuullada 8:39 - Markii ay ka soo baxeen biyaha jeexjeexay (HARPAZO) Eebaha iska Filibos, bohonkuna mar dambe isaga arkay, laakiin sii waday inuu ku rayrayn.
Philip ayaa iyada oo malaa'ig ayaa yeedhay Sayidka Rabbiga ahu wuxuu ku dhaadhacaan wadada in uu Yeruusaalem uga Gaza. Halkee Philip oo dhufatay bohon ah Itoobiya, kuwaas oo Filibos ku wacdiyey injiilka. Marka Philip ayaa si buuxda u dhameeyey ay shaqada, iyagoo injiilka ku wacdiyaya oo dad ku baabtiisay Bohonku wuxuu Filibos laysku soo qaadeen off by Rabbiga, waayo, meel kale dhulka.
In la qabsado iska si kale loo dhigo in la dhaqdhaqaajiyo galay adeeg sare si ay Rabbiga, midkood uu dumo ama jannada.
mid ka mid No aad dhufsan karo gacanta Rabbiga
John 10: 28-29 - waxaan iyaga siiyaa nolosha weligeed ah, weligoodna ma lumi doonaan, oo ninna kama dhufsan doono (HARPAZO) iyaga gacantayda. Maxaa Aabbahay ayaa i siiyey wax walba ka weyn, oo ninna kama dhufsan karo (HARPAZO) oo iyaga ka mid ah gacanta Aabbahay.
Kani waa mawduuc cajiib ah oo muujinaya Shepherd ayaa wadnaha uu u idaha. Waxa uu na og, waxaan aad codkiisa maqashaan iyo isaga raaca. ballankii uu ina siinayaa waa in aan cidna waa in ay na "dhufsan" gacantiisa ka awood. Aabbuhu siiyey Wiilka mar kale xadin karo.
Wuxuu na siiyaa amniga badbaadada iyo xaqiiq ah in aan waxba inaga sooci karin jacaylka Ilaah ee Ciise. Shaydaanka ama duruufaha, in si kale loo dhigo, ma noo dhufsan iska isaga ka.
Qaadida waa la xiriira
Mid ka mid ah qaybta ugu muhiimsan ee rayrayn waa in ay tahay "dhow," taas oo macnaheedu yahay waxaa la xiriira, iyo wax aad ka fili lahayd inay dhacaan wakhti kasta.
Kor si kale loo dhigo, sixiixin ah soo socda, oo waxaa jira erayo kale, ma calaamadaha nebiyada in hormaraan rayrayn, ama wax Golaha waa inuu ogaadaa dhici doona ka hor in dhacdadan qaadan kartaa meel.
Rajada ka dhigaysa aroosadda diyaar, oo ku nool nolol quduus ah, oo loo xilsaaray in uu aroos soo socda. Waxa kale oo ay abuuraa baahi loo qabo aadanaha lumay ee uu Rabbigu doonayo in ay gaaraan oo uu jacaylka iyo awoodda badbaadiyo. Waxay ka dhigaysa this ciidan oo wanaagsan iyo qalab si macnaheedu yar ee la xiriirta xaqiiqada ruuxiga ah in kumanaan dad ah la kulmaan maalin walba marka ay u tagaan waara oo aan Ilaah oo aan rajo.
Isla muddadaas, dabayaaqadii 1800, markii Rabbigu wuxuu sara kiciyey waxbarashada ee rayrayn ah oo la xiriira, adduunka soo maray mid ka mid ah jeer adeegayaasha iyo wacdinta ugu weyn taariikhda maanta. Isla la hadalka nebiyadii sii noolaaday, dunida dacaladeeda gubay dab injiilka.
The warqado u kaniisadda Tesaloniika joogay waa warqad waaraysa Bawlos. Sidaas daraaddeed waxaannu ku filan kartaa in Paul labada baro oo ku sheeg dhacdooyinka muhiim ah in rayrayn, performanc ka gees ah iyo dhib.
2 Tesaloniika sidoo kale waa mid ka mid ah warqad ugu muranka ku sugan Axdiga Cusub, marka la eego hal dhibic markii ugu for rayrayn kaniisadda Ilaah.
Siyaabo badan, shirka tusaale u ah Mu'miniinta kale (1 Tesaloniika 1: 8). Waxa ay ahayd kaniisad in noolaa filanayeen joogta ah soo laabashada Rabbiga. Waxay Toobadkeena oo sanamyo, oo hadda sugayay in Ciise soo dajinta samada ka (1 Tesaloniika 1:10).
In uu warqad ugu horeysay in Paul oo ku baaqay in Golaha si ay u sii wadaan si ay u fuliyaan shaqadooda iyo noolaadaan nolol caadi ah, waqti isku mid ah in ay ku sugaya Rabbiga (4: 11-12). Oo weliba wuxuu iyaga u qalbi qaboojiso by noo sheegaya in mar kale waan arki doonaa kuwa jecel yahay kuwaas oo horey u tegey guriga uu noo hor, markii kuwii dhintay mar kac leh rayrayn kuwa nool.
warqaddan labaad oo Bawlos
warqaddan labaad oo Bawlos waxaa qoran in ku dhow lix bilood ka dib kuwii hore ka badan. Wuxuu qorayaa in kiniisadda si loo saxo oo la saxo wararka xanta ah been iyo waxbarista beenta ah in uu qabsaday ee Golaha.
Oo ururka oo dhammu wuxuu ahaa cabsi iyo jahwareer la xiriira in Maalintii Rabbiga, iyo domstid ka iman doonaa dunida. The warar xan ah oo been ah iyo warqad la sheegay in ka soo Paul, haatan ku fikiray shirka in ay hore u ahaayeen gudaha domstid this kaas oo sidoo kale waa dhib.
Tani waxa ay ahayd wax Bawlos si cad u sharaxay labada af ahaan iyo iyada oo uu warqad ugu horeeyay ee dadka Tesaloniika. Sidaas daraaddeed isagu wuxuu qoray warqad si loo caddeeyo loona saxo is faham la'aan, kuwaas oo.
maalintii Rabbiga, Ilaah cadhadiisiina iyo bixitaanka Assembly
In Paul warqad waaraysa labaad ee Tesaloniika gaar ahaan waa afar meelaha Waxaan doonayaa in aan qori iyo diiradda on yahay kan Maalintii Rabbiga, Ilaah cadhadiisiina (Orge), kan heysta daafaca, iyo erayga "apostasia", taas oo macnaheedu noqon karaa qashinka ama ka tagay (rayrayn) .
Ugu dambeyntii, waxaan eegi yar gaar ahaan 2 Tesaloniika 2:13, ka dib markii baaritaan ku dhow waa aayadda la yaab leh oo u hadla labada rumayn iyo koobayaa waxbaridda Paul ee Golaha on rayrayn ka hor fitnada.
2 Tesaloniika 2: 1-2 - Marka ay timaado in Rabbigeenna Ciise Masiix iyo our lagu isagii u soo ururay, waxaannu idinka baryaynaa, walaalayaalow, in aan si lama filaan ah lumiso degenaan ama murugoon, hana by ruuxa kasta ama eray ama warqad, sheeganayso in ay Ilaah ha naga fogeeyo iyo in uu ku salaysan yahay ayaa iman maalinta Rabbiga.
First, waxaa muhiim ah in la caddeeyo waxa Maalintii Rabbiga runtii waa. Dad badan ayaa u dhiibayaa iyo waxaa loola jeedaa Maalintii Rabbiga sidii maalin kooban oo gaar ah oo 24 saacadood, kaas oo ka dhici dhammaadka dhibaatadii markii Ciise laabto arki karo. Sayidka ka dhigan tahay in maalinta Rabbigu iyo rayrayn waa kuwo isku oo ka baxa on mid ka mid ah.
Laakiin u eegis lagu sameeyo qaar ka mid ah Aayaadka Kitaabka Quduuska ah in u sheeg maalinta Rabbiga waxay muujinaysaa in aysan kaliya tixraac maalin keliya, laakiin waqti xukun ah oo daboolaya labada Dhibaatada, Ciise laabto arki karo iyo Millennium.
2 Butros 3: 10-23 - Halkan Maalintii Rabbiga ma tixraac Ciise laabto arki karo, ka dibna waxaynu og nahay in maalinta meydadka oo jannada waa la kala diri doonaa, oo waxaan ka heli samooyin cusub iyo dhul cusub oo kaalinta koowaad ka dib 1000 sano ee boqortooyadii dhulka.
Sida tuug habeen ah
Paul qeexayaa Maalinta Rabbiga dhacdo in yaabin doonaa, oo sida tuug habeen u yimaado. Marka dunidan ma filayn, waxa kaliya sida lama filaan doono, iyo si la mid ah sidii markii qof dumar ku dhaco foolanaysa oo arka in dunidan.
Paul ayaa xaqiijiyay Kitaabka description maalinta Rabbiga, iyo inaad adigu isku hadasho waxa ku saabsan sidii waqti baabbi'idda iyo xanuun. Later in 1 Th 5: 9, Bawlos waxa uu adeegsanayaa ereyga "xukun cadho" (orway) koobaya oo uu macnihiisu yahay waqtiga.
Ciise Masiix maanta
Maalinta Rabbigu wuxuu daaha ka daraaddeed cadho iyo domstid in soo bixi doonaa inuu dhulka u taliyo in ka badan muddo ah laga bilaabo rayrayn (bilowga dhibaatadii) iyo Millennium. Marka aan ka hadlo rayrayn shirka aan waa Maalintii Rabbiga, laakiin halkii ay magaca Ciise Masiix maanta.
maanta Ciise Masiix laguma sheegin Axdiga Hore, sida ay leedahay la qarsoon dhab ah in la sameeyo, kuwaas oo, runta ah ee kaniisadda Axdiga Cusub, iyo rayrayn ammaanta.
The muujinta Axdiga Cusub
1 Tesaloniika 1: 9-10 - The ay ka hadlaan sida naloo helay oo idinka mid ah iyo sida aad uga jeesateen oo Ilaah sanamyada si ay ugu adeegaan kuwa nool iyo kuwa Ilaaha runta ah iyo in ay sugto Wiilkiisa ka yimid xagga jannada, kan Ilaah kuwii dhintay, Ciise kan iga koriyey (ek) cadhada (orge) ka soo sara kiciyey.
1 Tesaloniika 5: 9 - Waayo, Ilaah ma na doorataan xanuunsado cadhada (orge) laakiin si aad u hesho inaynu ku badbaadno Rabbigeenna Ciise Masiix
Mid ka mid ah cilmiga Xujada Pre-trib muhiim u rayrayn shirka ka hor fitnada, waa in Ciise ayaa badbaadiyey iyo ka cadhada imanaysa badbaadiyey isaga oo kaniisad. (Eng. Cadho inay yimaadaan).
Erayga Giriigga ah ee qoraalka asalka cadhada waa Orge, iyo macnaha Ingiriisida ah ee "waxay muujinaysaa, cadho, iyo kacsi iyo Cadaab. Sidaas ay tahay markii ugu marka cadhada Ilaah iyo Cadaab u daadan doonaa dhulka ku dul.
theme A guud
Labada aayadahan Bible iyo wax waa mawduuc soo noqnoqda ee Axdiga Cusub waa in kaniisadda aan ku Qaddarray cadhada ku xanuunsado, laakiin halkii ay ka badbaadaya iyo waxa ka sii raagayaan.
Erayga "ka" (ek) ma dhex mari, laakiin halkii ay si iska fogeeyaan qof ama wax macno ahaan. Ciise wuxuu isticmaalaa erayga isla markii uu barayaa in "ay ka saareen dogobka ishaada ku jirase aad" Matayos 7: 5-tii dogobka ama qori dibna jidh maalin laga saaro, oo waa qayb ka dheer isha jirin.
Haddii aannu ballamadan in laga saaro iyo cadhada Ilaah la ilaashaa, sida shirka uu noqon karaa mid la joogo inta lagu guda jiro fitnada?
Rev 6: 15-017 - Boqorrada dhulka, ragga waaweyn iyo Guud, iyo hodan iyo xoog ah, oo dhan addoommo free, waxay ku dhuunteen godadka iyo webiyada, oo waxay ku yidhaahdeen buurihii iyo dhagaxyadii, "Fall noo qarin wejigiisii ​​oo carshiga iyo cadhada Wanka (orge) fadhiya. waayo, cadhadiisu maalin weyn ayaa yimid (AORIST), iyo kuwa istaagi kara?
ti hore waxaan la kulmi cadho eraygan (orge) in Revelation waa shaabaddii lixaad. falka "yimaado" waa fal (AORIST) macnaha iyo wax horay u horay u jiray, laakiinse haatan waxaa loo ogaaday in shaabaddii lixaad.
Up 19:15 - The ciidammada samada isagay soo raaceen iyagoo fuushan fardo cadcad, oo waxay qabeen dhar cad, kafan nadiif ah. Oo afkiisa ka soo baxay yimid seef af badan, inuu ku laayo quruumaha, oo wuxuu iyaga ku xukumi doonaa ul bir ah, oo wuxuu tramples Ilaah, Ilaaha Qaadirka ah, (orge) macsaraddii canabka oo xanaaqii cadhada ah
Dhamaadka dhibaatadii cadhadii Ilaah ayaa dhameystirtay, oo waannu la kulmaan markii ugu danbeysay markii Ciise yimaado in laga adkaado oo guul ka gaartay cadaawayaashiisa at Armageddoon.
Haddii kiniisadda oo uu leeyahay ballankii la dhawray domstid, tan iyo bilowgii ilaa dhammaadka, sidaas awgeed waa arrin cad in Church ma sii joogi kartaa on dhulka markii shaabadda koowaad waa jabtay. Paul ayaa xaqiijiyay ka dib this in 2 Tesaloniika, halkaas oo uu barayaa ku saabsan dhacdooyinka ay tahay in marka hore ay dhacaan ka hor domstid this doono dhulka u taliyo.
Muujintii 3:10 - Waayo, waxaad hadalkayga xajiyeen ku saabsan dulqaadasho, waxaan kaa dhawri doonaa, wuuna idin badbaadin saacadda jirrabaadda, taas oo dunida oo dhan iman doonaan, oo dadka ay imtixaanka keenaan.
Yabooh la mid ah la siiyey kaniisadda Tesaloniika sidoo kale waxay ahayd kaniisaddii Philadelphia Muujintii.
Maxaa yeelay, iyagu way xajin jireen erayga Rabbiga oo ku saabsan dulqaadasho, Rabbigu waxay dhawraan lahaa kalaab ah (geedkii, ka soo baxay) saacadda jirrabaadda oo dhulka kor iman lahaa. Erayga "ka" (ek) waa erey la mid ah sida 1 Tesaloniika 1:10 isticmaalo, iyo in ay muujinaysaa in kaniisadda waa in la laga saaray, iyo fog ka prövelsens halka.
yabooha kaniisadda Rabbiga at Philadelphia xadidaya ma aha oo kaliya markii cadhada Ilaah, laakiin Assembly ballankii lagula ballamay ka saac oo dhan maxkamad oo dhulka ku dul degi doona ha la wada ilaaliyo.
Apostasia - Qashinka ama ka tagay
2 Tesaloniika 2: 3 - Ninnaba yuusan idinku khiyaanayn sinaba. Waayo, marka hore, qashinka waa inay yimaadaan oo ninkii sharci, wiilka halaagga, si furan u soo baxaan
Paul bara shirka ku saabsan dood muhiim ah oo muhim ah, kuwaas oo ah in kaniisaddii ma filan karo in maalinta Rabbigu ah (dhib ah) iman lahaa ka hor saddex dhacdooyin muhiim dhici lahaa:
qashinka (apostasia) waa iman, mid ka mid ah oo haysta dib waa in ay goobta yimaadaan, iyo laglösthetens nin (gees) ayaa bayaan ay soo baxaan (Rev 6: 1)
Micnaha ay apostasia erayga
Eraygii Giriigga loogu tarjumay qashinka, khiyaano iyo Gardarro waa erayga "apostasia". magac "apostasia" wuxuu ka yimid falka "afistämi" kuwaas oo huvudbetydning waa "dhaqaaqin" ama "in ay wax ka mid ah meel kale u guuraan." ereyga waxaa loo isticmaalaa si gaar ah oo xidhiidh la leh dhaqaaqaan kasta oo ka mid ah meel kale, ama haddii ay iska tagaa ama waa qof oo kala duwan.
Waxaan ka heli apostasia erayga labo jeer oo keliya ee Axdiga Cusub, halkaas oo kale waa in Acts 21:21 halkaas oo uu ka hadlayaa "tanaasulaan Muuse," ama khaa'imiin Muuse. Iyadoo apostasia magac waa dhif in Axdiga Cusub, waxaa jira falka afistämi in hadalka lagu soo minguuriyey by shan iyo toban jeer. Kaliya saddex xaaladood waxaa loola jeedaa khaa'imiin yihiin diinta. (1 Tim.1, Heb 3:12 iyo 2 Timoteyos 2: 9).
In ka hartay laba iyo toban kiis ma afistämi "inuu u dhaqaaqo ka fog," in uu yahay qof (Luukos 4:13; Falimaha Rasuullada 12:10), xaqdarrada (2 Timoteyos 2:19), ayaa macbudka ka (Luukos 2:37) ama jidhka ka (2 Korintos 12: 8).
Tarjumaadaha ugu horeysay
In English Kitaabka Quduuska ah, Kitaabka Quduuska maqalka ah, waxaa jira qormo a: "haya'ad A suurto galka ah ee barafka apostasia: Departure (kiniisadda).
Toddobada tarjumaadaha ugu horeysay English ka 1394 - 1608, qof walba waxaa lagu turjumay erayga "tagay" (tagaan) loogu talagalay rayrayn. Sidee in King James Version ka mid ah tarjumaadaha ugu horeysay ay isticmaalaan qashinka eray halkii bixitaankii yahay?
Apostasia horumarka taariikhiga ah
1576 yimid tarjumaadda Catholic galay English sidoo kale loo yaqaan "Rheims Bible". Waxa ay ahayd tarjumaad ugu horeysay ee loo isticmaalo qashinka erayga halkii ka tagay (ka tagay).
Kotolikerna isticmaalo turjumidda waxaa in la tilmaamo in ay "qashinka" oo horreeyey ee 1500 ayaa iyada oo toobad.
Taa waxaa ka duwan, in 1611 markii King James Bible la daabacay dib loo eegay turjubaanada waxay turjumaadaha hore ka tagay si ay u baabba 'in la tilmaamo in Church Catholic iyo waxbaristii ay sida Ridada Weyn. Waxaa sidaas waxbaran ama macnaha erayga apostasia waxan go'aansaday ah, laakiin kuwaas oo Instruction si Church Catholic ah.
Kor - dhacdo gaar ah
Maxay tahay dhabta Paul markii uu barayaa ku saabsan dhacdo gaar ah oo ka dhici doona ka hor fitnada?
apostasia Greek kuwaas oo uu leeyahay article tirsa (oo ah erayga Giriigga ah ee sida caadiga ah uma) ka dhigaya Paul tilmaamay in ay dhacdo jirin kalimo gaar ah, oo aan wax ka dhaca muddo.
Qorniinka badan ayaa ku hadla oo ku markhaati fura oo ku saabsan khaa'imiin ah maalmaha ugu dambeeya. (1 Tim 4: 1-2, 2 h 3: 1, 1 John 2: 1). Dhibaatadu waxay tahay in mid ka mid ahaa kuwan Qorniinka taageero qashinka gaar ah ama dhacdo gaar ah si loo muujiyo iyo in ay calaamad u muuqata dhammaan Mu'miniinta ee jeer dhamaadka bixisaa. Dhammaan aayadaha Bible in la hadal ku saabsan khaa'imiin ah maalmaha ugu dambeeya waa guud oo aanu farta ku dhacdo gaar ah. Sida aan ognahay, waxa ay ahayd halkii ugu qashinka oo aad caasiyowdaan Sayidka waqtiga oo dhan. Yuudas sidoo kale ku hadla ee ku saabsan waxa ay hore u dhacday in markii rasuulladu. (Yuudas v 17 FF)
Kor, si kastaba ha ahaatee, waa dhacdo la hubo, iyo wax aan dhici muddo dheer. Waxa ay noqon doontaa qof gaar ah oo muujinaysa in jeer dhamaadka iyo soo gunaanaday ayaa la gaarey.
Isla mar ahaantaana, waa dhibaato marka Paul ma ku xusan qashinka this in uu warqad ugu horeeyay ee shirka.
Warqadda labaad kaniisadda waa cadeeyo waxa ku qoran soo socda ee koowaad iyo labaad ee Masiixa dhacdo in uu ahaa labada dhawaaqay iyo dhulka cad Tesaloniika. Large shiidaa cutubka kasta oo warqad this ka hadlaysaa soo laabtay Rabbiga iyo horumarka dhammaadka wakhtiga, laakiin aan marna ku sheegay wax ku saabsan qashinka ah sida ay dhacdo muhiim ah oo u gaar ah in hormaraan Maalinta Rabbiga iyo imaatinka ka gees ah.
Sidaas awgeed waa ka dhaw in ay aaminsan yihiin in Paul waxaa loola jeedaa ilaa imaatinka Rabbiga in 1 Tesaloniika 4:17 badan in ay qashinka u gaar ah in Qorniinku uusan xusin.
Waxa uu dib u celineyso
2 Tesaloniika 2: 6-7 - Oo waxaad ogaan waxa ay la mid hadda isaga dib u celineyso si uu soo baxo karaa oo keliya markii uu markuu yimaado. Durba, qarsoodiga dembigu ka shaqeeya. Kan hadda dib u haya oo kaliya in loo ogolaaday jidka ayaa looga tuuraa.
Aayadaha 4-8 ee cutubka isla shaaca ka gees ah, oo mid ka mid ah daafaca bal yaa isaga u heysta si uusan u muuqan kartaa ka hor uu mar waa. Maanta, waxaynu u qori 2014, oo aan in ay xaqiijin karaa ama uu haysta dib weli halkan marka ka gees ah oo aan weli hore u iman.
Naxwe noqdo haysta mar kale ku tilmaamay labada "waxa" iyo "uu". Ruuxa hadal Ruuxa Quduuska ah waa erayga "pneuma" ee Greek, taas oo ah eray jinsi lahayn. Isla mar ahaantaana in Ruuxa Quduuska ah sidoo kale waa Ilaah, waxa uu ku tilmaamay sida a "ayuu". Waxaa jiray male badan oo ku saabsan waxa uu dib u celineyso ka gees ah, laakiin in labada waa aan lab iyo dhedig ahayn halka rag ah waxay noqon kartaa ma jirto oo aan ka ahayn Ruuxa Quduuska ah.
Ruuxa Quduuska ah ee kaniisadda
Ruuxa Quduuska ah ula xiriir la kiniisadda, ayaa tan iyo maalintii Bentekoste Cutubka APG 2. In GT sidoo kale u muuqday Ruuxa Quduuska ah dhulka, laakiin halkii ay la top salka. Sida uu samayn doonaa in fitnada.
Ruuxa Quduuska ah ayaa sii wadi doona in ay ka shaqeeyaan dadka dhibta, laakiin ka uppryckelsens daqiiqad ka kor ku xusan. Sidaa darteed, waxaan mar dambe ma arki Ruuxa Quduuska ah wakiil Cutubka 3 of kitaabka Muujintii iyo wixii ka dambeeya. In xarfaha toddobada kiniisadood, annana waannu ku maqli erayadan: Kan dhego, ha maqlo waxa Ruuxu ku leeyahay shirka. Ka dib markii Cutubka 3aad, taas oo rayrayn Assembly ee ma aha Ruuxa Quduuska ah ku hadla. Muujintii 13: 9 - Kan dhego, ha maqlo. Nor waa Ruuxa Quduuska ah in yimaado badbaado kala duwan oo fariin Xukunkiisa qoomka in fitnada, ka dibna waxa ay halkii lagu samayn doonaa Malaa'igta. (Rev 14: 6-7).
Marka Golaha noqdo qabtay Ruuxa Quduuska ah oon haysanin meel ay ka shaqeeyaan ka dibna Golaha yahay macbudka oo kaliya in Ilaah jooga maanta wuxuu ogyahay leeyahay. (1 3:16). kaniisadda kaliya ee ka wakiil yahay in dhibta waa skökoförsamlingen, iyo Ruuxa Quduuska ah ma shaqeeyaan laga yaabaa in ama ka baxsan.
Kor in 2 Tesaloniika 2:13
2 Tesaloniika 2:13 - Laakiin waxaa nagu waajib mar kasta Ilaah u mahad waayo, waxaad walaalayaasha Rabbigu jecel yahayow, waayo, Ilaah tan iyo bilowgii idiin doortay badbaado oo quduus lagaga dhigay Ruuxa, iyo rumaysadka runta ah.
Eng trans. "Laakiin waxaa nagu waajib ah in ay Ilaah ku mahadsan tahay mar walba aawadiin, walaalo Rabbigu jecel yahayow, Good Maxaa yeelay, aad dooratay, midhaha ugu horeysay, waayo, kuwa baxsaday by quduusnaanta ee Ruuxa iyo rumaysadka runta."
Waxa ugu horreeya ee waxaa muhiim ah in la xuso oo xidhiidh la leh aayaddan waa in la Xuso ay ku lug of warqad waaraysa, kuwaas oo shaaca waxbaridda "Maalintii Rabbiga."
Cutubka oo magac uyaalka (Cutubka 2) Paul lahaa kaliya baray shirka ku saabsan ninkii sharci, kuwaas oo marka hore waa in ay soo baxaan si cad u soo bandhigay. Waxaan u aragnaa ka gees ah si ay u soo baxaan at shaabadda ugu horeeyay, iyo marka faras cad u muuqda.
waxa laga yaabaa in mahadnaq this waayo, badbaadintu in Paul muujinayaa in aayaddan, badbaadada la mid ah in uu tantly bareen in laba warqado ku qoray in bandhigno cadhada Ilaah? Xaaladdan oo kale, waa weli xaqiijin kale ee Paul ee theme soo noqnoqday ee Golaha, kuwaas oo badbaado Rabbiga iyo ilaalinta cadhada Ilaah iyo dhib.
Soo xulay in ay badbaadada
Si loo fahmo eraygan badbaadada (soteria) in Bawlos waxa uu adeegsanayaa, ayaa sidoo kale aad leedahay si aad fasiri sida wakhtigii uu saxiixo in.
badbaadada Erayga (. GR Soteria) waxay leeyihiin macnaha soo socda ee SOM; deliverence, ilaalinta, badbaadada, badbaadintaada, badbaadada laga faraxumaynta cadaawayaashooda.
Laga soo bilaabo erayga loo isticmaalo in Axdiga Hore, waxa aan arki karnaa in macnaha ereyga isbedel, sii hor doonno wakhtiga loo eego marka xarfaha lagu qoray.
Salvation ee Axdiga Hore
Axdiga Hore dhexdiisa, waxaan ka heli erayga 78 jeer oo waxaa inta badan la xidhiidha erayga Cibraaniga ah Yeshu'ha. Inta jeer ee ereyga waxaa loo isticmaalaa in Axdiga Hore, ku xiran badbaadada jirka cadaawayaashiinna ama tijaabooyin ku meel gaar ah oo reer binu Israa'iil.
Annaguna waxaan u aragnaa kuwo kale for ugu samatabbixinayo Israa'iil ka soo Masar, halkan, marka ay dhex mareen Badda Cas. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa Daa'uud markuu soo badbaadiyay oo ka Saa'uul cadaadis sii daayay, iyo badbaadadii dadka Israa'iil waxay ka cadaawayaashaada dabiiciga ah sida reer Falastiin, iyo reer Moo'aab iyo reer Edom.
Isaiah adeegsanayaa eraygan labadaba si ay u sharxaan samatabbixinta Israa'iil ee soo laabashada Masiixa, laakiin sidoo kale si ay u sharxaan ruuxiga ah iyo axdiga cusub in Rabbigu reer binu Israa'iil la sii adkayn doonaa.
Salvation Axdiga Cusub
Axdiga Cusub waa erayga "Soteria" loo isticmaalo by labada halis jirka ah (Falimaha Rasuullada 7:25, 27:34), laakiin wax kasta ka sarreeya by tilmaamay badbaadada ruuxiga ah aan ka helnay iyada oo dhimashada Ciise iskutallaabta dusheeda. (Phil 1:28, 2 Korintos 7:10 Efe 1.13)
Waxaan ku arki kartaa in macnaha erayga tani waxay noqon kartaa badbaadada labada ruux, oo badbaadada jirka ka khatar ku meel gaar ah ama xaalad. GT The inta badan waa halis jirka ah halka ugu badan ee Axdiga Cusub u taagan tahay dareen badbaado ruuxi ah.
Axdiga Cusub la qoray muddo ka badan 60 sano, by qorayaasha kala duwan. macnaha badbaadada erayga (soteria) labadaba waxaa loo fasiri karaa marka loo eego waqtiga la qoray, iyo iyada oo loo marayo taas oo qoraaga loo isticmaalo erayga.
Paul uu warqad u qoray muddo ka badan 20 sano, waana sidaas daraaddeed dabiici ah in ereyga isma bedesho qaar ka mid ah ay muhiimadda muddo. Marka la barbardhigo qaar ka mid ah Paul warqad ka dib in dadka Roomana way, tusaale ahaan, meeshii hadalka had iyo jeer loo isticmaalo iyadoo muhiimadda badbaadada ruuxiga ah, waa warqaddii u Tesaloniika, mid ka mid ah warqado horrayn Bawlos.
Warqad hore Paul ee
In warqado xarfaha hore Bawlos Tesaloniika iyo Galatiya, marna loo isticmaalo erayga "Soteria 'si uu u muujiyo badbaadada ruuxiga ah. Eraygii sidoo kale ma aha James oo sidoo kale waxa ku qoran marxalad hore ee taariikhda Kaniisadda. Paul halkii isticmaalaa si kale loo dhigo, inta lagu guda jiro waqtigan aan ku jirno in lagu qeexo badbaadada ruuxiga ah sida "kaleo" Galatiya 1: 6, "Dikaio-OE" Gal 2:16, "exagorazo" Galatiya 3:13 iwm
Warqadda ayaa laga yaabaa in qoraal ka dib markii warqado si dadka Tesaloniika ahayd 1 Corinthians, halkaas oo erayga "Soteria" marnaba loo isticmaalo. Waxa keliya ee warqad Paul labaad ee kaniisadda erayga Corinthians mar kale loo isticmaalo. Ereyga halkan lagu isticmaalay saddex jeer, iyo in marka aan erey loo isticmaalo oo xidhiidh la leh badbaadada ruuxiga ah marka hore aragto.
Waxa ay u muuqataa in markii Bawlos wuxuu adeegsanayaa eraygan in xarfaha hore oo uu, uu weli saameyn jidka GT ah eraygan waxa uu adeegsanayaa, oo sidaas waa sharaxaad ku saabsan badbaadada laga jirka ah ama khatar ku meel gaar ah ama xaalad by. Marka Paul in warqado ka dib iyadoo la isticmaalayo eraygan waa la betydning aqlabiyad badbaadada ruuxiga ah.
Brevens iyada oo mowduuca
cutubka kasta oo 1 iyo 2 Tesaloniika bandhigno wax ka dhigan tahay soo laabashada Ciise, iyo cilmiga waaraysa Bawlos. Sidaas darteed waa la erayo kale oo la xiriira in ay aaminsan yihiin in badbaadadan in Paul waxaa loola jeedaa in 2 Tesaloniika 2:13, sidoo kale shaaca iyo waa in la sii wado mowduuca, Paul bara.
dib u eegis A of 2 Tesaloniika cutubka 2 muujinaysaa in cutubka bixiyaa:
1. digniin A (vs. 1-3)
3. sharcilaawayaasha mid soobixi (vs. 3-5)
4. dib u celineyso (vs. 5-7)
5. gees performanc iyo imaanshiyaha (vs. 8-9)
6. dhagar iyo khiyaamo dadka (aayadaha 10-12)
7. A nasiib Rabbiga, oo call a (vs. 13-15)
Marka Paul danbeysa qortaa iyo muujiyaan mahad Rabbiga, waayo, badbaadintu in Ilaah baa u diyaariyey, waa in la arkay iftiinka uu edbinta hore ee cutubka isla. In si kale loo dhigo, ma hoos cusub in Paul uu bilaabo inuu hadlo ama mahad naqa, waayo, laakiin si fudud la sii wado kale oo ku saabsan mowduuca uu horey u baray oo dhan warqadda.
Our ammaanta mustaqbalka
2 Tesaloniika 2:14 - Tani waa waxa Eebe idiin yeedhay by our injiilka, in aad ku guulaysato ammaanaan Rabbigeenna Ciise Masiix
Aayaddan The dambe aan wada kulmi in 2 Tesaloniika 2 hadlaa of our ammaanta mustaqbalka ee Masiixa. Waa u ammaan in Paul ku hadla ee ku sugan 1 Corinthians meesha "halaabin ee waa inuu gashado impermanence," iyo "kan dhimanayaana waa inuu gashado dhimashola'aanta."
Ciise dhibcood si ay u characters badan in la raaco oo uu dhulka this laabto arki karo. Laakiin rayrayn waa dhacdo la saxiixin, iyo call Golaha looma sugeyso ka gees ah ama axdigiisii ​​uu la dhigtay reer binu Israa'iil, laakiin si "sugtaan Wiilkiisa uu ka yimid xagga jannada."
Waxaan ku noolnahay filanayeen joogto ah in Rabbigu ugu dhakhsaha badan iman doonaan, oo guriga u helno, cadhada inuu naga badbaadiyo in ay yimaadaan, oo ah in aannu isaga la noqon weligiis.